Fitifirana jiolahy tetsy Ampefiloha: nentina teo amin’ny fitsarana, naiditra am-ponja ilay polisy | NewsMada
Fitifirana jiolahy tetsy Ampefiloha: nentina teo amin’ny fitsarana, naiditra am-ponja ilay polisy
Par Taratra sur 28/08/2019
Nandray ny andraikiny ny Polisim-pirenena. Tsy vitan’ny hoe naneho fialan-tsiny sy fiaraha-miory amin’ny fianakavian’ilay niharam-boina fotsiny fa nitondra ny raharaha eo amin’ny fitsarana. Naiditra am-ponja, omaly, araka izany, ilay polisy nitifitra ilay jiolahy efa lavo tamin’ny tany, tetsy Ampefiloha.
Niteraka resabe teny anivon’ny fiarahamonina hatrany anaty tambajotran-tserasera “facebook” ny horonantsary momba ireo voalaza fa jiolahy notifirin’ny polisy teny amin’ny lalamby Ampefiloha, ny zoma 23 aogositra teo. Raha ny hita ao amin’ilay horonantsary, efa voatifitra ary mbola velona ilay lehilahy voalaza fa jiolahy kanefa notifitrin’ireo polisin’ny Sag teo amin’ny lohany manoloana ireo olona marobe nitangorona nanatrika ny zava-misy teny an-toerana. Adihevitra be ny momba ity raharaha ity, ao ireo nanome rariny ny polisy, teo indray ireo nijery manokana ny zon’olombelona na nolazaina fa jiolahy aza. Nisy fanambarana farany navoakan’ny eo anivon’ny minisiteran’ny Filaminam-bahoaka tamin’ny alalan’ny minisitry ny Filaminam-bahoaka (MSP), ny contrôleur général de police, Rafanomezantsoa Roger, omaly, momba ity raharaha ity. “Manoloana ny zava-nitranga ny zoma 23 aogositra 2019 niteraka fahafatesan’olona tetsy Ampefiloha. Maneho etoana ny polisim-pirenena ny fialan-tsiny ary miondrika am-panajana sy miara-ory amin’ny fianakaviana niharam-boina. Efa nisy ny fandraisana andraikitra ary efa natao ny fanadihadiana sy ny fanolorana eo anivon’ny fitsarana ary efa any am-ponja ny nahavanona ny heloka”, hoy ny fanazavan’ny MSP.
Hiaro sy hanakaiky vahoaka hatrany ny polisy…
Nambarany fa efa noraisina koa ny fepetra ara-pitsipi-pifehezana manoloana ity raharaha ity. Manamafy etoana ny polisim-pirenena fa tsy miray tsikombakomba amin’ny fandikan-dalàna na inona na inona endriny ary manome toky ny vahoaka fa hitondra hatrany ny tany tan-dalàna eo am-panatanterahana ny asany. “Nahatsiaro tena ho nahavita ny adidy sy ny andraikitra manoloana ny fiarahamonina ny fianakaviamben’ny polisim-pirenena raha nahasakana fanafihana izay nokasain’ireto jiolahy, notanterahina teny Antsahamanitra. Sahirana anefa raha niara-nahita tamin’ny besinimaro ny horonantsary nampiseho ny zava-nitranga teo Ampefiloha”, hoy hatrany ny MSP. Nanao fanamarihana ny eo anivon’ny minisitera fa adidy masina sy saropady ny fampandriana fahalemana ny tany sy ny ady amin’ny asan-jiolahy. Miantso ireo olom-pirenena rehetra hifanome tanana amin’ny famahana ny olana amin’ity toe-draharaha ity ny eo anivon’ny MSP satria ny “polisim-pirenena natao hiasa sy hiaro hanakaiky hatrany ny vahoaka”, araka ny teny filamatra apetrak’izy ireo hatramin’izay.